အကောင်းဆုံး ရွှေလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် ရွှေလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ်နှင့်တူသောအရည်အသွေးပြည့်ထုတ်ကုန်တင်ပို့လျက်ရှိ ရွှေလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်။ ကျနော်တို့အရွယ်အမျိုးမျိုး, ဒီဇိုင်းများနှင့်အချောသတ်ရရှိနိုင်ပါတယ်သောထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ပူဇော်ရမည်။ ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်တို့အကွာအဝေးစျေးကွက်ကိုဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်များ၏အစိတ်အပိုင်းများကြသည်အောက်ပါ, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုးကားနိုင်ရန်ပိုမိုမော်ဒယ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုပူဇော်ခြင်းငှါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။ ကျေးဇူးပြု ယခုအဆက်အသွယ်.
ပုံစံ - OPT-C6060
ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်းသည် ၂ ဖြစ်သည်-တူညီသောပါဝါ CO2 လေဆာဖြတ်တောက်စက် ၃ ကြိမ်.
ကမ္ဘာကြီးကိုသုံးနေတယ်’ထိပ်တန်းတင်သွင်းသည့်ဖိုင်ဘာလေဆာ,တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်,အဓိကအစိတ်အပိုင်း ၁၀၀ အထိရောက်နိုင်သည်,နာရီ ၀၀၀.
အလုပ်လုပ်ဗို့အား:380V ဖြစ်သည်/50Hz ဖြစ်သည်
ဤလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည်ရွှေကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်,လက်ဝတ်ရတနာ,ကြေးဝါ,stainless steel နှင့်အခြားပစ္စည်းများ.ရွှေလေဆာဖြတ်စက်၏စျေးနှုန်းသည်ကျောက်မျက်ရတနာများအကြားအလွန်ရေပန်းစားသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/gold-laser-cutting-machine.html
အကောင်းဆုံး ရွှေလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
လက်ဝတ်ရတနာများအတွက် Mini Welder
အသေးစားလက်ဝတ်ရတနာလေဆာဂဟေဆော်စက်ထူးခြားချက်: အပူဒဏ်ခံရသောဇုန်သည်သေးငယ်သည်,welding spot size ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်,welding spot သည်ပြားချပ်ချပ်နှင့်လှပသည်,အလွန်အကျွံတင်ရန်မလိုပါ-ဂဟေကုသမှု. ဂဟေဆော်နှုန်းမြန်သည်,အရည်အသွေးမြင့်မားသော,မဟုတ်-ဂဟေဆက်အဆစ်များကိုညစ်ညမ်းစေသည်,တိကျသောတည်နေရာ,ဂဟေဆော်နေစဉ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိရတနာများကိုထိခိုက်မှုမရှိပါ. ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်,ကြော့ရှင်း,အသုံးပြုသူကို-ဖော်ရွေဒီဇိုင်း,ergonomic ဖြစ်သည်,ရှည်လျား-အလုပ်သက်တမ်းကမပင်ပန်းပါဘူး. မျက်နှာပြင်သည် ၇ လက်မ LED မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုသည်,တရုတ်တွေနဲ့,အင်္ဂလိပ်,ရုရှား,စပိန်နှင့်အခြားဘာသာစကားများ,လေမှုတ်ကာကွယ်သည့်ကိရိယာနှင့် CCD စောင့်ကြည့်မှုစနစ်ကို 10X microscope ပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်. ၂၄ နာရီဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်,ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းသည်. စိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနိုင်သည်. သတ်မှတ်ချက်: လေဆာပါဝါ:60W လေဆာအမျိုးအစား:YAG လေဆာလှိုင်းအလျား:1064nm စွမ်းအင်:40J သွေးခုန်နှုန်းအကျယ်:0.1-၁၀ မိနစ် ကြိမ်နှုန်း:0-20Hz ပါ စက်အလေးချိန်:၂၈.၆ ကီလိုဂရမ် Spot Size Adjustment Range:0.1-၃ မီလီမီတာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပါဝါ:2kw ပါဝါလိုအပ်သည်:AC200±၅%/50Hz ဖြစ်သည် အအေးပေးစနစ်:ရေအေးစက် စက်အတိုင်းအတာ:၅၁၀ x ၂၉၀ x ၂၈၀ မီလီမီတာ လျှောက်လွှာ:အသုံးချနိုင်သောပစ္စည်းများ:ရွှေ,ငွေ,ပလက်တီနမ်,အစွန်းခံသံမဏိ,တိုက်တေနီယမ်,အခြားသတ္တုများနှင့်၎င်းတို့၏သတ္တုစပ်များ.ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်,လက်စွပ်,ဆွဲကြိုး,လက်ကောက်,လည်ဆွဲများ,တွင်း,spot welding brazing သည်,ချုပ်ရိုးများနှင့် mosaic အစိတ်အပိုင်းများ၏ claw အစိတ်အပိုင်းများကိုဂဟေဆော်ခြင်းကိုပြုပြင်ပါ,စသည်တို့.,အတုအံသွားသဲများနှင့်သေးငယ်သောတိကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်(ကဲ့သို့:inheritance နးခဲသည်,နာရီနွေ ဦး,kinescope,အီလက်ထရွန်သေနတ်ပရိသ,စသည်တို့.) ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်း 60 ခန့်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIF သို့မဟုတ်အခြားသူများတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၆၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；40%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
အသေးစားလုပ်ငန်း Laser Cutter
အသေးစားလုပ်ငန်းလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ထူးခြားချက်: ကုတင်ကိုအမြင့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်-အစွမ်းသတ္တိကိုကာဗွန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသံမဏိနှင့်ဆန့်ကျင်-ဂရပ်ဖိုက်ပန်းကန်၏လောင်ကျွမ်းခြင်းဒီဇိုင်းသည်အိပ်ရာကိုအပူချိန်မြင့်မားခြင်းမှမထိခိုက်ကြောင်းသေချာစေသည်. အလင်းတန်းသည်ကွဲထွက်သွားသည်,ဖြုတ်ရ၊ သယ်ရလွယ်ကူသည်,အတုအိုမင်းခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းချက်ကုသမှု. နောက်ဘက်ခုတင်အထူပြားကိုဂဟေဆော်သည်,split assembly structure သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လုပ်ဆောင်ရာတွင်အဆင်ပြေသည်,eccentric wheel lift တည်ဆောက်ပုံ,ဖြတ်တောက်မှုတည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်. မူရင်းလေဆာဂျာမနီမှတင်သွင်း,တည်ဆောက်ခဲ့သည်-double water cooling တွင်,အပူစွန့်ထုတ်မှုကောင်းသည်,THK လမ်းညွှန်မီးရထားသည်မြင့်မားတိကျမှုနှင့်အနိမ့်ဆူညံသံဖြင့်. သတ်မှတ်ချက်: သွေးခုန်နှုန်း:၁၅၀၀ မီလီမီတာ x ၃၀၀၀ မလှုပ်မယှက်မြန်နှုန်း:800 မီတာ/မိ ဖြတ်တောက်မြန်နှုန်း:မီတာ ၄၀/မိ မက်စ်.အရှိန်:0.8G သွေးခုန်နှုန်းအတွက်အခြားသတ်မှတ်ချက်များရှိပါသည်,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. လျှောက်လွှာများ:ကွဲပြားသောလေဆာစွမ်းအားဖြင့်သတ္တုများကိုဖြတ်ရန်သုံးသည်,သံအပါအဝင်,အလူမီနီယံ,တိုက်တေနီယမ်,သတ္တုစပ်များ,ကြေးဝါ,ကြေးနီ,သံ. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:2 ပတ်လည်-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIF သို့မဟုတ်အခြားသူများတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
လေဆာဂဟေဆော်စက်ထူးခြားချက်: စက်သည်အရည်အသွေးမြင့်လေဆာရောင်ခြည်နှင့်အတူကီလိုဝပ်မြင့်စွမ်းအားဖိုင်ဘာလေဆာအရင်းအမြစ်ကိုလက်ခံသည်,တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းလွတ်ခွင့်.အပြည့်အ ၀ ဖုံးအုပ်ထားသောဒီဇိုင်းသည်လေဆာအရင်းအမြစ်၏တံဆိပ်ခတ်နိုင်စွမ်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေနိုင်သည်. အထူးလေဆာရောင်ခြည်ထုတ်စက်ကိုခေါင်းနှင့်လေနှင့်ဆက်စပ်သော coaxial နှင့် sidehaft ဓာတ်ငွေ့ကာကွယ်မှုစနစ်များတပ်ဆင်ထားသည်,နိုက်ထရိုဂျင်ကာကွယ်ထားသော nozzle ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းများကိုအစက်အပြောက်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ချုပ်ခြင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. ကျွန်ုပ်တို့သည် coaxial CCD စောင့်ကြည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုသည်.မော်နီတာကိုအော်ပရေတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်&တောင်ကြီးမြို့;s table သည် welding alignment နှင့် workpiece ၏ welding အရည်အသွေးကိုစောင့်ကြည့်သည်. စိတ်ကြိုက်မျိုးစုံတပ်ဆင်နိုင်သည်-တံဆိပ်ခတ်ဂဟေဆော်ခြင်းသို့မဟုတ်အစက်အပြောက်ဂဟေအောင်မြင်ရန်စတိုင်ဂဟေကရိယာ;အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရန်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတပ်ဆင်နိုင်သည်. စက်ရုပ်များတပ်ဆင်ထားသည်,မြင့်မားသောတိကျမှု,မြင့်မားသောထိရောက်မှု,ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မြင့်မား,ဂဟေအရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်သည်. အသိဥာဏ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်,ပွင့်လင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်,မြန်မြန်ဆန်ဆန်. တင်သွင်းခြယ်လှယ်,အကြီးမားဆုံးလက်မောင်းအရှည်မှာ ၂၁၀၀mm ဖြစ်သည်,ခြောက်နိုင်သည်-ဝင်ရိုးချိတ်ဆက်,မည်သည့်နေရာ၌မဆိုစီမံကိန်းဂဟေဆော်ခြင်းကိုပြီးမြောက်စေနိုင်သည်,လမ်းကြောင်းနှင့်ထောင့်.ဥပမာ,အမှတ်,မျဥ်းဖြောင့်,ပတ်ပတ်လည်,စတုရန်း,အခြားပြားချပ်ချပ်ပုံများနှင့်အာကာသသုံးဖက်မြင်လမ်းကြောင်းသုံးဂဟေဆော်ခြင်း;optional နှစ်ခုဘူတာရုံဂဟေဆော် function ကို. သတ်မှတ်ချက်: လေဆာပါဝါ:1000W ဖြစ်သည် ခြယ်လှယ်ခြင်း:ABB ဂဟေဆော်ခေါင်း:ခေါင်းကိုလှုပ်ရမ်းလိုက်သည် လေဆာအလတ်စား:အမျှင်ဓာတ် စက်မှုဝင်ရိုး:ခြောက်-ဝင်ရိုးချိတ်ဆက် မက်စ်.လက်မောင်းအရှည်:1378mm လေဆာရင်းမြစ်:Raycus/MAX/IPG ဖိုင်အမျိုးအစားများအတွက်ပံ့ပိုးမှု:BMP,အာအိုင်,CDR,PLT,DX,JPG,PGN သွေးခုန်နှုန်းအတွက်အခြားသတ်မှတ်ချက်များရှိပါသည်,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. လျှောက်လွှာများ:ဂဟေကဲ့သို့တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါ:ပါဝါဘက်ထရီ,ဘက်ထရီကိစ္စ,hardware fitting,မီးဖိုချောင်ထည်နှင့်ရေချိုးခန်းဆက်စပ်ပစ္စည်း,စစ်ရေးထုတ်လုပ်မှု,တူရိယာများနှင့်ကိရိယာများ,မော်တာ,အိုင်တီမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအစိတ်အပိုင်းများ,ဆီလီကွန်စာရွက်,သတ္တုအစိတ်အပိုင်း,အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ,လေဆာရောင်ခြည်ဖြာ,ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများစသည်တို့. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:2 ပတ်လည်-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIF သို့မဟုတ်အခြားသူများတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
မှိုလေဆာဂဟေဆော်စက်ထူးခြားချက်: ဂျာမနီမှတင်သွင်းသောသတ္တုလိုင်ပေါက်ကိုလက်ခံပါ,corrosion ခံနိုင်ရည်,မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ.လိုင်သက်တမ်းမှာ ၈ ဖြစ်သည်-10 နှစ်,xenon ဆီမီးခွက်သက်တမ်းသည်အဆ ၈ သန်းကျော်ရှိသည်. ကမ္ဘာကြီးကိုအသုံးပြုသည်&တောင်ကြီးမြို့;အလုပ်ချိန်အတွင်းမျက်လုံးယားယံခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်အဆင့်မြင့်ဆုံးအလိုအလျောက်အရိပ်ပေးနိုင်သောစနစ်. မျက်နှာပြင် ၇ လက်မ LED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်,အင်္ဂလိပ်နှင့်တရုတ်ဘာသာဖြင့်အခမဲ့ကူးပြောင်းခြင်းကိုနားလည်နိုင်သည်,နိုင်ငံတကာဈေးကွက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်,CCD monitoring system ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်. သတ်မှတ်ချက်: လေဆာစွမ်းအင်:400W ဖြစ်သည် ဂဟေဆော်ခြင်းအတိမ်အနက်:0.1-၃ မီလီမီတာ လေဆာလှိုင်းအလျား:1064nm စွမ်းအင်:140J ဖြစ်သည် စိတ်ကူးယဉ်သွေးခုန်နှုန်း:0.1-20ms လေဆာဂဟေဆော်ကြိမ်နှုန်း:0-100Hz စားသုံးနိုင်သော:XENON မီးခွက်/FILTER ELEMENT အအေးစနစ်:၁.ရေ 5P မှ 3P အထိအအေးခံခြင်း ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်:၁၄ kw ပါဝါလိုအပ်သည်:220V ပါ±10%၅၀/60Hz 380V±10%၅၀/60Hz ဖြစ်သည် အာမခံချက်:၁၅ လ အလုပ်ချိန်ကိုဆက်လုပ်ပါ:၁၆ နာရီ ※အခြားသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်.,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. ※ လျှောက်လွှာများ:ကျယ်ပြန့် die အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်-မှိုပုံသွင်းခြင်း,ပလပ်စတစ်မှို,လူမီနီယံ beryllium ကြေးနီမှို,အသေးစားနှင့်အလတ်စား-မှိုအရွယ်အစား,အပိုမှိုကြီးများ,သဲတွင်း,ဒါကိုတော့,ထောင့် chipping နှင့်အနားယူဝတ်ဆင်,sealing အနားများနှင့်အခြားအသေးစားအစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်သည်.အဆိုပါသက်ဆိုင်အခြေစိုက်စခန်းပစ္စည်းများပါဝင်သည်:die steel အမျိုးမျိုး,အစွန်းခံသံမဏိ,beryllium ကြေးနီ,အဖိုးတန်သတ္တု,အလွန်ခက်ခဲပစ္စည်း,ကွင်းဆက်,လက်ဝတ်ရတနာ,အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ,sensors များ,တိကျစက်ပစ္စည်းများ,ဆက်သွယ်ရေး,connectors များ,data လိုင်းများ,လက်မှုပညာများ,စသည်တို့. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ခန့်မှန်းချက် 3-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
လေဆာပြွန်ဖြတ်စက်ထူးခြားချက်: optical system နှင့် control system ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု. ပိုမိုမြင့်မားသောဖြတ်တောက်ခြင်းအရည်အသွေးနှင့်ထိရောက်မှု,80m အထိမြန်နှုန်းဖြတ်တောက်/မိ,လှပသောအသွင်အပြင်,လှပသောဓါး. ဂျာမန်လူမျိုးမြင့်သည်-စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျော့နည်းစေသည်,ဂီယာနှင့်ထိန်သိမ်း.ဂျပန်လမ်းညွှန်သံလမ်းများနှင့်ဝက်အူအားလုံး. သတ်မှတ်ချက်: လေဆာစွမ်းအင်: ≤2000W ပါ ဖြတ်တောက်ခြင်းအရှည်:3M/၆ မီတာ Clamping အကွာအဝေး: Ø10-Ø350 ပြန်လည်-တည်နေရာတိကျမှု: ±0.03mm Axial တည်နေရာတိကျမှု: ±0.၀၅ မီလီမီတာ/မီတာ အခြားသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်.,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. လျှောက်လွှာများ:သတ္တုပြွန်များဖြတ်တောက်ရန်သင့်လျော်သည်,rectangular tubes များဖြစ်သည်,ပုံပျက်သောပြွန်,စသည်တို့.,အစာရှောင်ခြင်းမြန်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူ. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ခန့်မှန်းချက် 3-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
အကာအကွယ်အဖုံးနှင့်အတူဖိုင်ဘာလေဆာအမှတ်အသားစက်ထူးခြားချက်: မျိုးစုံ-Power Laser Light Source ဖြစ်သည်,များစွာသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်. မြန်မြန်,မြင့်မားသောထိရောက်မှု,တည်ငြိမ် output ကိုပါဝါ,ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားသည်. သက်တမ်းရှည်,ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-၁၀၀ အတွင်းအခမဲ့,နာရီ ၀၀၀,၂၄ နာရီအတွင်းပြေးနိုင်သည်,ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်အခြေအနေများ. သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား,သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်,ထုတ်လုပ်မှုနေရာချွေတာ. သတ်မှတ်ချက်: လေဆာစွမ်းအင်:20W/30W/50W/100W ဖြစ်သည် အလုပ်လုပ်ဧရိယာ:100x100mm/၂၀၀x၂၀၀ မီလီမီတာ/300x300mm အမှတ်အသားမြန်နှုန်း:7000mm/s အလုပ်လုပ်ဗို့အား:110V ဖြစ်သည်/220V ပါ/50-60Hz ဖြစ်သည် အအေးခံအမျိုးအစား:လေအေး လျှောက်လွှာ:3C စက်မှုလုပ်ငန်း,မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း,ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ,အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ,အိုင်တီလုပ်ငန်း,hardware လုပ်ငန်း,တိကျသောတူရိယာများ,လက်မှုပစ္စည်း,အမြင့်နှင့်အနိမ့်ဗို့အားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများစသည်တို့.,သစ်အတွက်သင့်တော်သည်,သံမဏိ,ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများစသည်တို့. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ခန့်မှန်း ၃-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၆၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；40%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်